Aluminium mbiri Fekitori | China Aluminium profile vagadziri uye vatengesi
Maindasitiri Aluminium Series
Keteni Wall Aluminium Series
Hwindo & musuo Aluminium Series
EOSS Sisitimu Hwindo & Musuwo
Aluminium Hwindo & Musuo Series
Maindasitiri aluminium mbiri
Industrial aluminium mbiri, inozivikanwawo se: maindasitiri aruminiyamu extrusion zvinhu, maindasitiri aluminium alloy profile. Maindasitiri aluminium mbiri chinhu chiwanikwa chiwanikwa nealuminium sechinhu chikuru chinhu. Aluminium tsvimbo dzinogona kuwanikwa nemhando dzakasiyana dzemuchinjikwa-chikamu kuburikidza nekupisa kunopisa uye extrusion. Nekudaro, iro chikamu cheakawedzera alloy chakasiyana, saka zvemakanika zvivakwa uye mashandiro eminda yemabhizimusi aluminium profiles akasiyana zvakare. Kazhinji kutaura, maindasitiri aluminium profiles anoreva kune ese maAluminium profiles kunze kweayo ekuvaka madhoo nemahwindo, madziro emaketeni, kushongedza kwemukati nekunze nekuvaka zvivakwa.
Motokari aluminium profile
Ongororo yeHuajian Aluminium yeboka inoratidza kuti ingangoita 75% yesimba rekushandisa rine chekuita nehuremu hwemotokari, kudzikisira huremu hwemotokari kunogona kudzikisira kushandiswa kwemafuta nekubuda. Inofananidzwa nesimbi, aluminium ine mikana yakajeka.
Maketeni emadziro aluminium profile
Maketeni uye mawindo madziro masisitimu anoshandiswa seyakavaka mahamvuropu uye anovimbisa yakakwira masikati machena mukati meiyo nzvimbo yemukati, kugadzira nzvimbo yakachengeteka uye yakagadzikana kune vanogara muchivako. Zvakare, aruminiyamu keteni madziro isarudzo inozivikanwa nekuda kwekukwirira kwavo kwekuyevedza uye yavo isina muganho mikana mune yekuvaka maficha.
Ndezvipi zvakanakira casement windo ...
Iyo yakakosha kudyidzana: Huajian Alumin ...
Kubatsira kweAluminium Fomu Basa
Runhare: 0536 335 666
Adress: Kwete. 5888 Donghuan Road, Linqu County, Shandong Province, China